မိန္းကေလးတိုင္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ နာမည္ႀကီး D&C အတြက္ ေၾကာ္ျငာရိုက္ကူးခဲ့တဲ့ ယြန္းယြန္း - Zeekwat Hot News
August 9, 20190274
ယြန္းယြန္းက အရြယ္ေရာက္လို႔ လွေသြးၾကြယ္ေနျပီးျပီ လူငယ္ေကာင္းေလးမ်ားရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈ အားေပးနွစ္ သက္မႈေတြကို ရရွိေနတဲ့သူလဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ ယြန္းယြန္းက အႏုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အုပ္စိုးခန္႔နဲ႕ ပက္သက္တဲ့ အခ်စ္ေရးေတြ ထြက္လာေပမယ့္ ေကာလဟာလအေနနဲ႔သာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။
လက္ရွိမွာေတာ့ ယြန္းယြန္းက သူမရဲ႕အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ပညာေရးေၾကာင့္ အားစိုက္မလုပ္ေသးပဲ အခမ္းအနား ပြဲမ်ားနဲ႔ Photo Shooting ေတြေလာက္ လုပ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ယေန႔ သူမက မိန္းကေလးတိုင္း ႏွစ္သက္ေလ့ နာမည္ႀကီး Brand တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ D&C Collection ဆိုင္မွာ အိတ္ေတြ ဖိနပ္ေတြနဲ႔ အတြက္ Photo ရိုက္ကူးထားတာကို “Me for D&C Monsoon Collection 🌧👠👜” ဆိုျပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
“မနက္ျဖန္က်ရင္ Junction Square မွာ 7th store opening and promotion ေလးရွိပါတယ္ေနာ္ !!” ဆိုျပီး မိန္းကေ လးေတြ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေၾကာ္ျငာေပးထားပါတယ္ေနာ္။ အႏုပညာရွင္ ေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွားမႈ ပုံရိပ္ေလးေတြ ကုိ သိရွိခံစားႏုိင္ေအာင္လုိ႔ ဇီးကြက္ Page ေလးကုိ Like လုပ္ထားဖုိ႔ ေျပာခဲ့ပါရေစေနာ္ .….……။
မိန်းကလေးတိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ နာမည်ကြီး D&C အတွက် ကြော်ငြာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ယွန်းယွန်း
ယွန်းယွန်းကတော့ ကလေးဘဝကတည်းက အနုပညာလောကမှာ နိုင်ငံကျော် ကလေးသရုပ်ဆောင် တစ်ဦးအနေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ယွန်းယွန်းက ကလေးဘဝကတည်းက အကယ်ဒီမီဆုကြီးကို “တိမ်မင်းသမီးရဲ့ ဒဏ္ဍာရီ”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်အထူးဆုကို 2013 ခုနှစ်က ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူလဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ယွန်းယွန်းရဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းလွန်းလို့ အနုပညာလောကမှာကော ပရိသတ်များ ရင်ထဲမှာ နေရာယူထားသူလေး ဖြစ်ပါတယ်နော်။ အခုဆိုရင် ယွန်းယွန်းက အချိန်တွေပြောင်းလဲတာနှင့်အမျှ သူမဟာတစ်နေ့ တစ်ခြားလှ လာပြီး အရွယ်ရောက်နေတဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်လို့ ပရိသတ်ကြီးက ခေါင်းဆောင်မင်းသမီး အဖြစ်တွေ့မြင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယွန်းယွန်းက အရွယ်ရောက်လို့ လှသွေးကြွယ်နေပြီးပြီ လူငယ်ကောင်းလေးများရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု အားပေးနှစ် သက်မှုတွေကို ရရှိနေတဲ့သူလဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ယွန်းယွန်းက အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အုပ်စိုးခန့်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အချစ်ရေးတွေ ထွက်လာပေမယ့် ကောလဟာလအနေနဲ့သာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ယွန်းယွန်းက သူမရဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကို ပညာရေးကြောင့် အားစိုက်မလုပ်သေးပဲ အခမ်းအနားပွဲများနဲ့ Photo Shooting တွေလောက် လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ယနေ့ သူမက မိန်းကလေးတိုင်း နှစ်သက်လေ့ နာမည်ကြီး Brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ D&C Collection ဆိုင်မှာ အိတ်တွေ ဖိနပ်တွေနဲ့ အတွက် Photo ရိုက်ကူးထားတာကို “Me for D&C Monsoon Collection 🌧👠👜” ဆိုပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။ “မနက်ဖြန်ကျရင် Junction Square မှာ 7th store opening and promotion လေးရှိပါတယ်နော် !!” ဆိုပြီး မိန်းကလေးတွေ ပရိသတ်တွေအတွက် ကြော်ငြာပေးထားပါတယ်နော်။ အနုပညာရှင် တွေရဲ့ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေကို သိရှိခံစားနိုင်အောင်လို့ ဇီးကွက် Page လေးကို Like လုပ်ထားဖို့ ပြောခဲ့ပါရစေနော် .….……။